बाढी पहिरोले देश रो*एको बेला मलेसियाबाट पनि आयो दु*खद खबर – ईमेची डटकम
बाढी पहिरोले देश रो*एको बेला मलेसियाबाट पनि आयो दु*खद खबर
Posted byइमेची संवाददाता July 14, 2019 October 23, 2019 Leaveacomment on बाढी पहिरोले देश रो*एको बेला मलेसियाबाट पनि आयो दु*खद खबर
कञ्चनपुर, २९ असार । सडक दुर्घटनामा परेर मलेशियामा कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ ढकनियाका ३६ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद भट्टको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार मलेशियाको शाहआलमको जलान कोटाकेमुनिङ मार्गमा डेराबाट मोटरसाइकलमा काम गर्ने पसलतर्फ जाने क्रममा दुर्घटना हुँदा भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भएको खबर पाइएको वडाध्यक्ष शिवराज पनेरुले बताउनुभयो ।
आरएल कावालन प्रोमा सेक्युरिटी गार्डका रूपमा कार्यरत भट्टसँगै नुवाकोट घर भई सोही कम्पनीमा कार्यरत शिव दाहालको समेत मृत्यु भएको बताइएको छ । मृत्यु हुने दुवैको श*व स्थानीय अस्पतालमा राखिएको छ । मृतक भट्टको श*व नेपाल ल्याउनका लागि पहल भइरहेको वडाध्यक्ष पनेरुले बताउनुभयो ।
खैरेनीमा चरी बाघको आत*ङ्क
भीमदत्त नगरपालिका–६ खैरेनीमा केही दिनदेखि चरी बाघ (लिओपार्ड क्याट) ले आत*ङ्क मच्चाएको छ । बाघले गोठमा पसेर स्थानीयका बाख्रा खान थालेको छ । चरी बाघ संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा समावेश गरिएको जनावर हो ।
खतरामा काठमाडाैं उपत्यका, सर्वसाधारणलाई चिन्ता बढ्याे
शिल्पा किन रोइन् ? यसबारे केकीको मन छुने र उत्प्रेरक स्तातास ! (पूरा पढ्नुहोस्)